Yan Aung: ၀ါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမှီ...
လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ဖတ်သွားတယ်း)
ကိုရန်ရဲ့ ၀ါသနာလေးများကို ဖတ်လိုက်ရတော့ မေဒီ့အတွက် ဗဟုသုတတွေ ရလိုက်တယ်။ ကိုရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေနော်။ ခုလို ပို့စ်အရှည်ကြီး ရေးပေးတဲ့ ကိုရန့်ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ...
ကိုရန်အောင် ရဲ့ ဝါသနာပို့စ်လေးကို ဖတ်ရင်း ဝမ်းသာလိုက် ဝမ်းနဲလိုက် ပျော်ရွှင်လိုက် အားကျလိုက် ..ရီရိလိုက်နဲ့ ရသအစုံပေးပြီး ကိုရန်အောင် ရဲ့ ဝါသနာ တွေကို သိလိုက်ရပါတယ်..
what an adorable man? Long journey, bor.
Anyway, when you look back, you did your best. Wishing you all the best.